Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Ousmane Dembele Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'Na-eche Nwa Ya'.
Ousmane Dembele Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Nyocha nke Speedy French Footballer gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ obere amaara ama banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ọ na-egwuri egwu mana ọ bụ naanị mmadụ ole na ole tụlere akụkọ ndụ Ousmane Dembele nke gụnyere ịmatakwu banyere nne na nna ya, nwanne ya nwoke, nwanne ya nwanyị, na ibi ndụ ya wdg.
Ndụ ya n'èzí pitch bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido.
Ousmane Dembele Childhood Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Ousmane Dembele mụrụ na 15th ụbọchị Mee 1997 na Vernon, Northern France site n'aka Ousmane Snr (nna) na Fatimata Dembele (nne).
Nne na nna ahụ na-esi Mauritania (West Africa) na-akwaga na France iji nweta ndụ ka mma.
Mgbe ọ bụ nwatakịrị, Ousmane bụ onye na-atụgharị uche nke football nwere mmasị na ya ma na-eche naanị igwu ya kama ịmụ ihe.
N'ezie, ọ bụ naanị onye ezinụlọ ya jụrụ agụmakwụkwọ. N'ịchọpụta talent na atụmanya ya, nne na nna ya kwere ka Ousmane gaa n'ihu na nrọ ya.
Dị nnọọ ka nwanne nwoke na nwanne Ousmane Dembele ga-esi gaa n'ihu agụmakwụkwọ ha, ya onwe ya chere na ọ chọrọ nnukwu ndozi na ọrụ ya.
Mgbe ọ dị afọ 6, o mere mkpebi buru ibu iji soro nne ya na-eme njem, site na ebe a mụrụ ya Vernon (Northern France), na Rennes (North-East France) izute nwanne nna ya Sambagué onye na - abụ ndị na - agba ọsọ na ihe nlereanya nye ya.
N'ebe ahụ, ọ mụtara ihe n'aka ya wee malite ịmalite ọrụ ntorobịa ya na Madeleine Évreux football na 2004.
Fatima Dembele ya nwere mmetụta dị ukwuu n'ịduzi ya n'ime ọrụ ya dị oke mma.
Ousmane Dembele Ndụ Ezinụlọ:
A maghị nna Mush banyere nna ya n'ihi ihere ya na mgbasa ozi. O gosipụtara onwe ya mgbe nwa ya nwoke banyere Borussia Dortmund. (foto n'okpuru).
Ndị nne na nna Dembele - Ousmane Snr (nna) na Fatimata Dembele (nne).
dị nnọọ ka Paul Pogba, ndụ nke Ousmane Dembele dị na gburugburu nne ya, Fatimata Dembele bụ onye a na-ahụta na ọ nwere mmetụta dị ukwuu n'ọrụ nwa ya nwoke.
Ndị klọb bụ ndị na-eche banyere ihe a na-asọpụrụ ya Rennes ha nile sitere na nne ya Fatimata.
Dabere na The Guardian, "Fatimata bụ onye na-ekpebi ọdịnihu nke Ousmane, na-eme mkparịta ụka ya na nkwekọrịta nkwekọrịta."
Onye na-elekọta Dembele na-enyere ya aka, Badou Sambague onye bụ onye ezinụlọ ya na ọgụgụ isi nke football. Nke nyere ya ọrụ itu ukwu.
Foto dị n'okpuru ebe a na-egosi Ousmane Dembélé ya na nne ya na onye ọrụ ya Fatimata na onye enyemaka.
Ousmane Dembele Biography Eziokwu - Ndụ Tupu amebụ:
Tupu ọ mara ama, Ousmane Dembele na-egwuri egwu maka ndị ntorobịa Madeline Evreux na Evreux tupu ha abanye na Rennes II na 2010. Ọ bụ naanị 13 afọ mgbe ahụ.
Ọ na-egwuri egwu maka klọb maka afọ 5 tupu ọ kwaga na nkewa ha dị elu na oge 2015/2016. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, ọ ghọrọ Njikọ 1 kachasị mma.
Ousmane bụ onye ọkpụkpọ kachasị nta iji ruo akara akara goolu 10 na njikọta nke ndị ọkacha mmasị Thierry Henry na Anthony Martial.
Na 12 May 2016, Dembele bịanyere aka na nkwekọrịta afọ ise na ụlọ ọrụ German Borussia Dortmund. N'ebe a, ọ bụghị naanị na ọ kacha mma na klọb. Ọ ghọrọ akụ kachasị mma nke football.
Ousmane Dembele Bio - Okwu na Dortmond:
Borussia Dortmund gwara FC Barcelona na UEFA otu oge maka ịkatọ mkpa ọ dị maka Ousmane Dembélé.
Ousmane Dembélé mgbe ọ nụrụ nke a jụrụ iso ha zụọ. Ọ gbagara ma kwupụta na ya dị. Nke a bụ ihe dugara ná mmanye a kwagara na klọb nke nrọ ya.
Barcelona kwụrụ ọtụtụ ego maka ya. Na njedebe, onye ọ bụla nwere obi ụtọ.
Nrọ nke Barcelona:
Ọ ghọrọ onye egwuregwu ụwa kachasị achọsi ike na afọ 2017. Nke a dugara aha ukwu na-achụ ya dị ka sharks.
Na 25 August 2017, La Liga n'akụkụ FC Barcelona kwupụtara na ha ruru nkwekọrịta ịbanye Dembélé maka million 105 nde-gbakwunyere mgbakwunye, n'okpuru ọgwụ na 28 August.
Ọ ga-abịanye aka na nkwekọrịta afọ ise ma kwụrụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ ya na million 400 nde. Nkwekọrịta a mere ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ-nke abụọ kachasị dị egwu (na euro), naanị nke abụọ ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ Barcelona mbụ Neymar.
Rennes ga - enweta nde kwuru nde iri abụọ sitere na Borussia Dortmund n'ihi ire ya. Nke a bụ ego ekele maka Rennes maka ịtọ ntọala nke superstar. Ọrụ nke ọma.
ma Seydou Keita na Frédéric Kanouté bụ arụsị nke obodo ka Ousmane Dembele.
Site na ndị ọkachamara, ọ na-agbaso Radamel Falcao na Lionel Messi. Mkpebi o kpebiri ịhọrọ Barcelona sitere n'otú o si ele egwu egwu Lionel Messi na ịsọpụrụ klọb nke nyere Seydou Keita nrọ ọrụ.
Ousmane Dembélé gosipụtara nkwanye ùgwù ya maka Radamel Falcao site n'ide aha ya n'obi ya mgbe ọ nwere oge dị mma n'akụkụ osimiri. Nke a gosipụtara nkwanye ùgwù ya maka ya.
Ousmane Dembele Ndụ:
Ezigbo enyi ya na Borussia Dortmund bụ Pierre-Emerick Aubameyang.
Ha abụọ na-anya otu ụgbọ ala. Ousmane Dembele ụlọ na nke Auba bụkwa nke otu ụkpụrụ. Tupu nnukwu ego agafee, o nwere atụmatụ iji dozie edozi isi ya na nke ya ezi enyi.
Ọtụtụ ụdị ndụ ya agbanweela kemgbe nnukwu ego ọ kwagara na nnukwu ndị Spen. Na FC Barcelona, ​​ezigbo enyi ya bụ Samuel Umtiti (nke dị n'etiti etiti FC FC Barcelona).